Antony Blinken oo booqanaya dalka Kuwait. - Iftiin FM
Antony Blinken oo booqanaya dalka Kuwait.
Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee dalka Marykanka, Antoni Bilinken ayaa lagu wadaa in uu booqdo dalka Kuwait, xilli ay dowladda Maraykanka doonayso inay dalalka Gacanka Carbeed marti-geliyaan Shaqaalihii Reer Afganistan ee la shaqeyn jirtay Hawlgalka Milliteriga Maraykanka ka wadaan dalkaasi.
Madaxweyne Qoor qoor oo baaq u diray culimada Soomaaliyeed.
Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee dalka Marykanka, Antoni Bilinken ayaa booqosho sida oo kale ku soo mari doono dalka Hindiya si uu Madaxda dalalkaasi uga hadlo Ka-bixitaanka Ciiddanka Maraykanka ee Afganistan, Ka-hortaga Cuddurka COVID 19 iyo qoddobo kale
Coronavirus oo ku sii faafaya qaaradda Afrika.
Wabiga Shabeelle oo ku soo jabay magaalada Jowhar ee xarunta maamulka HirShabelle.
Puntland Oo Xukuno Adeg Ku Riday 9 Nin Oo ka ganacsadaan maandooriyaha khamriga..
Prof John Lonyangapuo oo ka hadlay Dooroshada Guud 2022-ka .